Zon’Olombelona An-Tsarintany Ao Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2012 11:37 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, македонски, Français, 日本語, Svenska, Español, English
Mampiasa sarintany an-tserasera ny mpiaro ny zon'olombelona any Kambôdza hanangonana antontan-kevitra, hanaraha-maso ary hampisehoana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona manerana ny firenena. Sithi na ny vavahadin-tseraseran'ny mpiaro ny zon'olombelona dia manana ny Sarintanim-panosihosena ahitana amin'ny ankapobe ny fiitatry ny fanosihosena ny zo isan-karazany any Kambôdza.
Niakatra tokoa tao anatin'ny taona vitsivitsy izao ny adin-tany ary ny maro amin'izy ireo dia mifandraika amin'ny tetikasam-pampandrosoana izay mamindra toerana mponina an'hetsiny
Efa namoaka lahatsoratra momba ny fampanofàna tany be velarana mampanontany tena any Kambodza ny gazety mivoaka isan'andro Weekend
Eto ambany ny fanehoana an-tsarintany ny toerana namoanoana mpanao gazety any Kambodza
Ny Global Voices dia efa nanasongadina ny fametrahana an-tsarintany ny fonja ataon'ny Licadho, vondrona mpiaro ny zon'olombelona ihany koa. Eto ambany ny fanaovan-tsarintany ny vondrona mpiaro ny fahalalaham-pitenenana
Azo jerena ihany koa ny sarintany ahitana ny Mpikambana ao amin'ny Parlemanta. Tamin'ny volana lasa teo dia naseho vahoaka ihany koa ny fotoanan'ny fahatapahan-jiro nitranga tao Phnom Penh. Misy ihany koa ny sarintanin'ny lalana, hotely fisakafoanana, sampan-draharaham-panjakana, tranombarotra ary hotely fatoriana ao Phnom Penh. Misy koa vohikala navoaka hanarahana ny fotodrafitrasam-pampandrosoana ao Kambodza sy ny lohahevitra mifandraika amin'ny fampandrosoana. Mandritra izany fotoana izany, mitaraina amin'ny fahalafosan'ny sara idirana ao amin'ny Arsivam-Pirenena ny mpikaroka momba ny sarintany